Digital Printer,UV Printer Uye Dtg Printer Manufacturer | Focus
Kutarisa, Zvese kune kukosha kwemutengi.
Focus Inc. Mavhidhiyo ENebulas-62f
Focus Inc. Mavhidhiyo eA3 Dtg Printers 3350
Focus Inc. Tutorials Mavhidhiyo EA3 Uv Printer 3350
Focus Inc. Mavhidhiyo eA2 Dtg Printers 6040
Focus Inc. Mavhidhiyo eA2 Uv Printers 6040
Focus Inc. Mavhidhiyo eA1 Uv Printers 6090
Focus Inc. Vhidhiyo yeAtlas-1311
Focus Inc. Mavhidhiyo ENebulas-35f
Kuratidzwa kweFocus Inc.
Kuprinda Muenzaniso NeUv Printers
China Focus UV DTF inopisa stamping mhinduro vagadziri - Focus Inc.
Pane dzimwe nguva apo iwe unofanirwa kutora yako kudhinda advertising kumusoro. Nguva zhinji, izvo zvakadhindwa zvinonyatsoda kukwezva kwakasarudzika uko tsika dzechinyakare dzekudhinda dzimwe nguva dzinogona kushomeka. Mhedziso yesimbi kune yako yakadhindwa zvivakwa inogona kuvapa iyo inonyanya kudiwa 'yakasiyana' uye aesthetics inodiwa kuita pesvedzero. Kwete chete zvigadzirwa izvi zvinotaridzika zvakanaka, zvakare zvinoburitsa pfungwa yekirasi uye mhando.Pane nzira mbiri dzaungashandisa kupedzisa kwesimbi kune chako chakadhindwa - Metallic Foil Stamping uye Metallic Ink Printing. Nepo ese ari maviri aya matekiniki achishandiswa kusimudzira aesthetics uye kupa kupenya kupenya kune ako madhindiki, anosiyana zvakanyanya, zvese mukuita uye mhedzisiro.Metallic Foil Stamping, sezvinoratidzwa nezita racho, inzira yekusimbisa foil pastock yako kuburikidza nekupisa nekumanikidza. Kuisa zviri nyore, zvinoreva kubatanidza foil pamusoro pesarudzo yako iyo isingangoipa iyo yakasarudzika kutaridzika, asi magadzirirwo zvakare.Ukuwo, Metallic Ink Printing imwe nzira yakasiyana zvachose. Inoshandisa rudzi rwakakosha rweinki yakasanganiswa nezvidimbu zvesimbi chaiyo, ichipa kutaridzika kwesimbi inopenya. Ingi inotanga kushandiswa mukudhinda, asi kuti uwane mhedzisiro yaunoda, ingangoda majasi anotevera zvakare.
Tarisa UV kudhinda kweGorofu Bhora! Supplier& vagadziri | Focus Inc.
Dhinda pahuni, simbi, mapurasitiki, ceramics, acrylic, girazi, dehwe, dombo uye nezvimwe neyakagadziridzwa UV printer kubva kuFocus Inc.! Iine yakananga kune substrate uye yakananga kune chimwe chinhu kudhinda kugona, iwe unenge uine shanduko inodiwa kudhinda magadzirirwo etsika pane akasiyana zvigadzirwa - nekukurumidza uye nyore. Uyezve, imwe neimwe yemaprinta edu eUV anouya nebasa rakatanhamara revatengi uye software, saka unogona kuzorora uine chokwadi nekuziva kuti timu yako ichave nekudzidziswa uye nerutsigiro runodiwa kuti kugadzirwa kurambe kuchifamba zvakanaka.
Chiratidziro cheFocus A2 DTG Printer Athena Jet Plus chena tshirt inodhinda mugadziri& vagadziri | Focus Inc.
Kudhinda kweDTG inzira yekudhinda magiraidhi pamachira nezvipfeko-uye zvakanyanya kunyanya kwatiri, ma tee. Inoshandisa yakagadziridzwa inkjet tekinoroji kudhinda chero mifananidzo yaunoda pahembe. Funga nezvayo segiant inkjet printer, asi yehembe. Panzvimbo pekudhinda mapepa anofinha ethesis kana mapepa ekirabhu yako yemabhuku, michina yedu yeDTG iri kudhinda shato dzakaipa dzichisvetuka nepakati pemahopu ekupisa unicorns- kana senge, inotapira lil bunny tsuro yekuzvarwa kwemwana wako. Tichadhinda zvachose chero chaunoda, asi isu tinoda madhiri akaipa.
Mirror effect inodhindwa pagirazi kana tranparent acrylic, iyo yaunogona kuona mifananidzo iri pamusoro asi mufananidzo uri kumashure.Kutanga, dhinda ruvara pagirazi kana acrylic akajeka uye wodhinda chena ruvara, iyo girazi mhedzisiro inogona kupera. Iyo yekupedzisira chena ndeyekumashure kuitira kuti ruvara rwuve pachena.
Kuti tichengetedze nguva nesimba zvemutengi, tinopa "ONE STOP" sevhisi iyo inosanganisira Call centre register, Mubvunzo unodiwa, Mabatiro eDambudziko, Kuongororwa kwepamhepo, maSpare parts shipping uye kudzoka kumberi.Uzivi hwedu hwekutarisira:Mutual benefit, Innovation uye Humanization. Chinangwa chedu chekupedzisira: Kugutsa zvinodiwa pamusika; kupa mhinduro yakanakisa kumutengi, zvese zvatinoita, zvese kwauri.Sevhisi yedu tenet:kupfuura chishuwo chako, kuve kambani yeIncrement Service.Kuvimbika kwedu nekuvimbika:Kuvimba uye mutoro wega muhukama hwese.
Kuti uchengetedze nguva nesimba remutengi, tinopa iyo "ONE STOP" sevhisi inosanganisira Call centre rejista, Mubvunzo unoda, Kubata dambudziko, Kuongororwa kwepamhepo, Kutumira zvikamu uye kudzoka kutumira.
Yedu Kutarisira Philosophy
Kubatsirana, Innovation uye Humanization.
Chinangwa Chedu Chekubatana
Kugutsa zvinodiwa pamusika; ipa mhinduro yakanakisa kumutengi, zvese zvatinoita, zvese kwauri.
Yedu Service Tenet
Kupfuura chishuwo chako, kuve kambani yeIncrement Service.
Kuvimbika Nekuvimbika Kwedu
Kuvimba uye mutoro wega wega muhukama hwese.
Focus Digital Technology Co., Ltd (Online rejista yekutarisa). yakatangwa muShanghai, China. Ndeupi mugadziri wekugadzira uye kugadzira yakanyanya kunaka uye inogona DTG yakananga kune printa yehembe, dhijitari LED-UV flatbed printer, pretreatment muchina, CTS komputa kune screen imaging system, zviratidzo&kushambadza zvigadzirwa zvevatengi. Isu tanga takamira pane Ready-To-Print mhinduro. Takanga takatarisa mundima iyi yedhijitari kwemakore 17. Isu tinopa zvese zvigadzirwa nemutengo unonzwisisika uye chaiyo-nguva yerutsigiro inotsamira pachedu mutsara wekugadzira, ruzivo rwehunyanzvi, zvakaomarara zvikamu zvekutenga chiteshi uye altitudinal ine chekuita nekuita, isu tinotarisa pamusika kuti tipe ichangoburwa nhau huru uye kugadzira zvigadzirwa zvinobatsira, zvedu. Chikwata chekutsigira chine ruzivo chinounganidza maitiro ese uye gamuchira kudzidziswa kutsva panguva yekupa rubatsiro rwakanyanya.
Vese vatengesi vanogona kutarisana nematambudziko aya: Hunhu hwakanaka asi mutengo wakakwira, Mutengo unonzwisisika asi sevhisi yakaipa, tsigiro yakanaka asi yakashata mhando, insequential charge, haigone kuwana kudzidziswa kwakazara, haigone kuwana chaiyo-nguva rutsigiro, Mhinduro inonotswa sebvunzo yakaoma. uye kushandisa. Focus digitaalinen ikambani kugadzirisa rudzi urwu dambudziko kwauri maximal Tinoita sei?-------------------------------------- Nguva chaiyo "LONG-DISTANCE-LOG-ON -DIAGNOSIS" Tsigiro; "ONE STOP" sevhisi Isu tinoreva kuomarara " Four Chain (Material department control-Assemble line control-QC department control-Logistic department control ") quality control system kuti ive nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvakamira pamberi pekutumira, Asi hapana zvigadzirwa zviri zana. % yakakwana,Iyo chaiyo-nguva uye inobudirira tsigiro ndiyo inonyanya kukosha, mutengi anogona kuwana iyo chaiyo-nguva inobudirira rutsigiro neyedu ONLINE SUPPORT uye LONG-DISTANCE-DIAGNOSE SUPPORT yekusimbisa kuti matambudziko ese nemibvunzo inogona kugadziriswa nekukurumidza. Zvakare isu tinounganidza matambudziko ese pamwechete kuti tiite semhinduro zvinyorwa, kuti mutengi atore kubva kune yedu ftp nekukurumidza.
Takanga takatarisa mundima iyi yedhijitari kwemakore 17.
Nyika / Nharaunda
China KUSARUDZA SEI INDIAN DISTRIBUTOR UV uye DTG PRINTER MUCHINA? vagadziri - Focus Inc.
Global Agent InodiwaFocus Inc. iri kutsvaga maGlobal agents nevashambadziri pasi rese.Chero ani anofarira uye anovimba kuve mumiriri wedu, ndapota taura nekutengesa depertment painfo@focusij.com
Customer Consultation Supplier& vagadziri | Focus Inc.
Basa rakanaka kubva kuFocus vatengi, ivo vari kuwedzera uye nehunyanzvi, bhizinesi richienda nani uye nani.Huya ushande neFocus Inc. yedu, ziva zvakawanda nezve maprinta, ziva zvakawanda nezvemusika uye ipa zvigadzirwa zvakanaka kumusika.
Vatengi vanoshanyira Focus hofisi uye fekitori
Kuti uchengetedze nguva nesimba remutengi, tinopa iyo "ONE STOP" sevhisi inosanganisira Call centre rejista, Mubvunzo unoda, Mabatiro edambudziko, Kuongororwa kwepamhepo, Kutumira zvikamu uye kudzoka kutumira.Yedu yekutonga uzivi: Kubatsirana, Innovation uye Humanization.Chinangwa chedu chekupedzisira: Kugutsa zvinodiwa pamusika; ipa mhinduro yakanakisa kumutengi, zvese zvatinoita, zvese kwauri.Sevhisi yedu tenet:kupfuura chishuwo chako, kuve kambani yeIncrement Service.Kuvimbika kwedu nekuvimbika:Kuvimba uye mutoro wega muhukama hwese.
Inzwi reMutengi weDTG Printers Athena Jet Plus kubva kuFocus Inc.
Isu tinofara zvikuru kuti zvigadzirwa zvedu zvinobatsira vatengi kuona mararamiro avo uye zvirongwa.Kufara kwazvo kugovera rwendo rwekuvhura uye mufaro newe. Kana iwe uchida kuona vhidhiyo, unogona kuwana kurudziro yebhizinesi muvhidhiyo.